“ब्याजदर निर्धारण बजारले गर्नुपर्छ, आन्दोलनले गर्दैन” डा. भट्ट
पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रले पारेको प्रभावका बारेमा २ प्रकारको विश्लेषण हुँदै आएको छ । दुई तिहाई प्राप्त शक्तिशालि सरकारले जारी गरेको स्वेत पत्रका आधारमा सरकार सँगको अपेक्षा र त्यसले पारेको प्रभाबका बारेमा गहिराईसम्म पुगेर चर्चापरिचर्चा हुन थालेको छ । उत्पादन, ब्याजदर, नयाँ लगानी, निक्षेप लगायतका विषयलाई हेर्दा चित्त बुझाउँन सक्ने अबस्था नरहेको जानकारहरुले बताउदै आएका छन् । बर्तमान सरकारले बजेटमा ८% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ तर विभिन्न निकायले ६ प्रतिशतको हाराहारीमा सिमित अुने आकलन गरेको देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव र ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा असर पार्ने देखिएको छ । वित्तीय क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र अर्थतन्त्रका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्टसंग बैंकिङ खबर डटकमले गरेको कुराकानी ।
पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा भएको गतिविधिले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
नेपालको अर्थतन्त्रलाई आर्थिक चरहरुको माध्यमबाट हेर्नुपर्छ । जस्तै उत्पादनको स्थिति, ब्याजदरको स्थिति, नयाँ लगानीको स्थिति, डिपोजिट ल्याण्डिङ्गको स्थिति यि सबै चिजहरुबाट हेर्दाखेरी केही सकरात्मक र केही नकरात्मक अबस्थामा रहेपनि चित्त बुझ्दो अबस्था भने देखिदैन् । ग्रोथ स्थिति घट्न सक्ने सम्भावना छ । समग्र अर्थतन्त्रमा सरकारले अपेक्षा अनुरुपको उल्लेख्य योगदान दिन सकेको छैन । नयाँ नीति निर्माणले सहयोग पु¥याउछ कि भन्ने थियो तर त्यसले पनि निरासा ल्याएको छ । सरकारले लगानी कर्ताको आत्मबल बढाउन जस्तो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पर्ने हो त्यस्तो भएको छैन ।
त्यसो भए अबको अर्थतन्त्रको अबस्था कस्तो रहला ?
यही अबस्थामा जाने हो भने त पक्कै पनि राम्रो हुँदैन । यो अबस्थालाई परिवर्तन गर्नु पर्दछ । अपेक्षा गरिएको भन्दा पनि निकै कमजोर अबस्थामा अहिलेको अर्थतन्त्र आईपुगेको छ ।
2019-03-03 - 147 view(s) - bankingkhabar